Shirka Dib-u-eegista Dastuurka oo Baaqday
Dowladda Somalia ayaa dib u dhigtay shirweynaha dib u eegista dastuurka oo maanta ka furmi lahaa magaalada Muqdisho, kadib markii guddiga madaxa bannaan iyo guddiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka ee baarlamaanku ay si wadajir ah u qaadaceen ka qeybgalka shirweynaha.
Wasaarrada dastuurka ayaa dib u eegista ku macnaysay sababo farsamo darteed.
Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid, madaxa guddiga dib-u-eegista baarlamaanka Somalia oo akhriyay war-murtiyeedka labada guddi ayaa ku eedeeyay wasaaradda dastuurka inay faramaroosatay awoodda iyo geeddi-socodka dib u eegista dastuurka.
Dhinaca magaalada Kismaayo-na waxaa maanta baaqday shir halkaasi uga furmi lahaa madaxda maamul-goboleedyada oo ka arrinsan lahaa xaaladda siyaasadeed ee Somalia iyo waliba mugdida soo kala dhexgalay maamulladan iyo dowladda dhexe.
Dhinaca Puntland-na, waxaana soo baxaya xiisad siyaasadeed, kadib markii madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas iyo kuxigeenkiisu Cabdixakiim Camay uu is-afgaran waa soo kala dhexgalay. Madaxweyne kuxigeenka ayaa toddobadkii hore sheegay in Puntland aysan ka qeybgali doonin shirka Kismayo, balse hadalkiisa waxaa buriyay madaxweyne Gaas oo sheegay inay Kismaayo tagayaan. Dhanka kale madaxweyne Gaas ayaa shalay dib u howgaliyay taliyaha booliska Puntland ooh ore shaqada uu uga fadhiisiyay madaxweyne kxuigeenka.
Dhageyso - Shirkii Dastuurka iyo Shirkii Kismayo oo Baaqday iyo is-afgaranwaa ka dhex-taagan madaxda Puntland